Banyere Anyị - Ningbo Hilectro Power Tecnology Co., LTD
The isi azụmahịa nke Haitian mbanye
Ningbo Hilectro Power Technology Co., Ltd bụ isi azụmahịa nke Haitian mbanye, onye na-pụrụ iche na n'ichepụta ihe electric forklift, stacker, odida obodo ụgbọ, golfcart etc.The ụlọ ọrụ na-ana na nkà ihe ọmụma nke Haitian Group "High Ogo, elu arụmọrụ na ume -azọpụta ", na aiming na kpọbata ndị kacha mma na klas na ngwaahịa na ahịa.
The tozuru okè na-emepe emepe n'elu ikpo okwu nke Haitian Group
Dabeere na tozuru okè na-emepe emepe n'elu ikpo okwu nke Haitian Group, Hilectro Power Technology nwere onwe onye na-mepụtara controller.professional moto n'ichepụta otu, lagre mpempe akwụkwọ metal na eserese workshop.At n'otu oge ahụ, na ụlọ ọrụ na-eburu si ISO: 9001 quality management usoro strictiy, pursuiting àgwà mma mgbe niile.
The ụlọ ọrụ dị na Industry Mpaghara nke Beilun nke bụ otu n'ime nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri na gburugburu ụwa. The nke ebe factory na-ekpuchi 110 thous square meters.Equipped na multi mmepụta edoghi onye kwa afọ ike bụ n'elu 10 thous tent nke forklifts, ụlọ ọrụ nwere elu testing center n'otu oge.
Elu àgwà R & D otu
Ịchịkọta na ọkachamara nlekọta, ụlọ ọrụ nwere a elu ọgwụgwụ R & D otu. Site na ijikọta na anụ ụlọ na esenidụt ahụmahụ, na otu na-emeziwanye àgwà nke forklifts nọgidere, na tyring ka họọrọ na n'elu suppliers na njem.
Ike site na Globalso.com
Usoro 3 kachasị elu na ngwongwo Global Pallet ...
Akwukwo nyocha ohuru nke Technavio banyere ahia ahia pallet gwongworo zuru ụwa ọnụ na-enye nyocha nke usoro kachasị mkpa a na-atụ anya imetụta echiche ahịa si na 2017-2021. Technavio kọwara ihe na-apụta